EX - ABSDF: သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂-၆)
ထိုင်း ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး တစ်ဦးကို ဖမ်းဝရမ်းထုတ်
အီတလီ လေကြောင်းပြပွဲ မစတင်မီ လေယာဉ် ၂ စီးတိုက်မိ၊ လေယာဉ်မှူး ၁ ဦးသေဆုံး
ဘန်ကောက်တွင် အချိန်မတော် ဆိုင်ကယ်ပြိုင်မောင်းသည့် ထိုင်းလူငယ် ၄၃၇ ဦးဖမ်းဆီး အရေးယူ
ဘင်္ဂါလီ ၇၀၀ ကျော်ပါ သင်္ဘောကို မြန်မာရေတပ်က ဘင်္ဂလားရေပိုင်နက်ထဲသို့ လိုက်လံ ပို့ဆောင်
IS နှိမ်နင်းရေး ပြင်သစ်မှာ ၀န်ကြီးများ ဆွေးနွေးမယ်
ယန်စီမြစ်တွင်း သင်္ဘောနစ်မြုပ်ပြီး လူပေါင်းရာကျော် ပျောက်ဆုံး
စာရေးဆရာထင်လင်းဦးကို အလုပ်ကြမ်းနှင့် ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ် ချမှတ်
သပိတ်မှောက်ကျောင်းသားများ အာမခံ ပယ်ချခံရ၊ ၀န်းရံပြည်သူတဦး အရေးပေါ်ဆေးရုံတင်
ယာမြေကြောင့် မိမိကိုယ်ကိုမီးရှို့သူ၏ မိသားစု တပ်ပိုင်မြေကျူးကျော်မှုဟုဆိုကာ ထပ်မံတရားစွဲခံရ
မြန်မာလူငယ်ခေါင်းဆောင်တွေ အိမ်ဖြူတော် အတွေ့အကြုံ
မြန်မာ ယူ ၂၀ ယူကရိန်းကို ဂိုးပြတ်ရှုံး
လေးလပတ် အစည်းအဝေး ထူးခြားမယ်ဆို
တရုတ် စစ်ရေး လေ့ကျင့်မှုတွေ စတင်
စိုက်ပျိုးရေးချေးငွေ မကျေသေးသူ အခုနှစ် ချေးငွေ ထပ်ရမည် မဟုတ်
တောင်ငူတက္ကသိုလ် (ကြို/ပို့)ယာဉ်တစ်စီး တိမ်းမှောက် ကျောင်းသူ ၂၈ ဦး လိုက်ပါလာရာ ၂၅ ဦး ဒဏ်ရာရ
ဗွီအိုအေဌာနမှူး ရခိုင်ပြည်နယ် အတွေ့အကြုံ
ASEAN လူငယ်ခေါင်းဆောင်မှု အိုဘားမားချီးကျူး
နာမည်ကျော် ဟောလိဝုဒ်မင်းသား စစ်တွေ ဒုက္ခသည် စခန်းသွား
မေလ (၃၀)ရက်နေ့ ထုတ် မြန်မာသံတော်ဆင့် အတွဲ(၄)၊ အမှတ်(၁၂)
မေလ (၂၉)ရက်နေ့ ထုတ် Hot News Weekly Vol5No 244
ဇွန်လ (၂)ရက်နေ့ ထုတ် မြန်မာ့အလင်း နေ့ စဉ် သတင်းစာ
ဇွန်လ (၂)ရက်နေ့ ထုတ် ပြည်ထောင်စု နေ့ စဉ် သတင်းစာ
ဇွန်လ (၁)ရက်နေ့ ထုတ် The Messenger Daily Newspaper
ကားမှောက်မှု သေသူများအတွက် အာမခံကြေး ၃၀ သိန်းစီ ရမည်
Posted: 02 Jun 2015 07:08 AM PDT
ထိုင်းမှာ လူကုန်ကူးမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖမ်းဆီးမှုတွေထဲမှာ ပထမဆုံး စစ်တပ် အရာရှိကြီးတစ်ဦး ပါဝင်လာခဲ့။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ လူကုန်ကူးမှုနဲ့ ပတ်သက်တယ်လို့ စွပ်စွဲ ခံရတဲ့ ထိုင်းစစ်တပ် အဆင့်မြင့် အရာရှိကြီး တစ်ယောက်ကို ထိုင်းတရားရုံးက ဖမ်းဝရမ်း ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မာနတ်တ် ခေါ်န်ပန် Manas Kongpan ဟာ ထိုင်းစစ်တပ်ရဲ့ စစ်ဆေး မေးမြန်းမှု ခံရမှာ ဖြစ်ပြီး ရာဇဝတ်မှု စွဲချက်နဲ့ ရင်ဆိုင်ရဖွယ် ရှိပါတယ်
Posted: 02 Jun 2015 03:56 AM PDT
အီတလီနိုင်ငံ အဒ်ရီယာတစ် ကမ်းရိုးတန်း တောတောရစ်တိုကမ်းခြေက လေကြောင်းပြပွဲ မစတင်မီမှာ လေယာဉ် ၂ စီး လေထဲမှာ တိုက်မိလို့ လေယာဉ်မှူးတယောက် သေဆုံးပါတယ်။ သေဆုံးသွားတဲ့ လေယာဉ်မှူးကို ရင်ခွဲစစ်ဆေးဖို့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန် ၁ ရက်နေ့က အမိန့်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၄၇ နှစ်အရွယ် လေယာဉ်မှူးဟာ တခြားလေယာဉ်မှူးတယောက်နဲ့အတူ ကြေးမုံပျံသန်းမှုလို့ ခေါ်တဲ့ လေကြောင်းပြကွက်ကို ပြဖို့ ကြိုးစားအပြီး သေဆုံးခဲ့တာပါ။ မိသားစုတွေကေ
Posted: 02 Jun 2015 03:47 AM PDT
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်ခရိုင်တွင်း ညအချိန်မတော် လူသွားလမ်းပေါ် ဆိုင်ကယ် အပြိုင် မောင်းနှင်တဲ့ လူငယ်စုံတွဲ ၄၃၇ ယောက်ကို ဖမ်းဆီးအရေးယူလိုက်တယ်လို့ ထိုင်းရတ် သတင်းမှာ ဖော်ပြပါတယ်။ အဲဒီလူငယ်တွေကို ဘန်ကောက်ခရိုင် နယ်မြေ ၈ ထဲမှာ ရှိတဲ့ တလတ်ဖူးလ်၊ ဘန်ယိလေးနဲ့ ဆမ်လဲ့မြို့နယ် ရဲစခန်း ၃ ခုက ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား ၁၀၀ ကျော် ပူးပေါင်းပြီး မေ ၃၁ ရက်နေ့ မနက် ၂ နာရီအချိန်က လူငယ်တွေ ဆိုင်ကယ်ပြိုင်မောင်းလေ့ရှိ
Posted: 02 Jun 2015 03:32 AM PDT
လှေစီးဒုက္ခသည် ဘင်္ဂလီ ၇၂၇ ယောက်ပါ သင်္ဘောတစီးကို မြန်မာရေတပ်က ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ရေပိုင်နက်အတွင်းသို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ သင်္ဘောကို လွန်ခဲ့သော ၄ ရက်က ကပ္ဗလီပင်လယ်အတွင်း တွေ့ရှိ ထိန်းသိမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး က ပြောသည်။ ကပ္ဗလီပင်လယ်တွင် မျောနေသော ငါးဖမ်းသင်္ဘောသည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသို့ သွားရောက်လိုသူများသာဖြစ်ကြောင်း သမ္မတ၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်
Posted: 02 Jun 2015 03:29 AM PDT
အစ္စလာမ်မစ် နိုင်ငံ အဖွဲ့ IS လက်နက်ကိုင်တွေကို နှိမ်နင်းရေး အစီအစဉ်တွေ ဆွေးနွေးဖို့ နိုင်ငံ ၂၀ က နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးတွေဟာ ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာ တွေ့ဆုံကြဖို့ ရှိပါတယ်။ အီရတ်နိုင်ငံတွင်း ဖြစ်နေတဲ့ အရေးအခင်းတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ ရေရှည်ခိုင်မာတဲ့ နိုင်ငံရေးအဖြေ တခုရဖို့ ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်တယ်လို့ ပြင်သစ်နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနက ပြောပါတယ်။ အီရတ်နိုင်ငံရဲ့ ရာမာဒီမြို့ IS တွေလက်ထဲ ပြီးခဲ့တဲ့လက
Posted: 02 Jun 2015 03:27 AM PDT
တရုတ်ပြည် တောင်ပိုင်း Hubei ပြည်နယ် ယန်စီ မြစ်ပေါ်မှာ လူ ၄၅ဝ ကျော် တင်လာတဲ့ Eastern Star ခရီးသွား သင်္ဘော မှောက်ပြီး နစ်မြုပ်ခဲ့တဲ့အတွက် ကယ်ဆယ်ရေးတွေ ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ ခုထိ သင်္ဘော ကပ္ပတိန်နဲ့ စက်ခန်း အင်ဂျင်နီယာ အပါအဝင် လူ ၁၃ ဦးလောက်ကိုပဲ ကယ်ဆယ် နိုင်သေးပြီး လူ ၅ ဦးသေဆုံးကာ လူပေါင်းရာကျော် ပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ Xinhua. သတင်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒီသင်္ဘောဟာ နန်ကျင်းမြို့ကနေ ချုန်ကျင်းကို သွား
Posted: 02 Jun 2015 03:15 AM PDT
သာသနာညှိုးနွမ်းစေမှုနဲ့ တရားစွဲခံထားရတဲ့ စာရေးဆရာ ထင်လင်းဦးကို ဒီကနေ့ ချောင်းဦးမြို့ နယ် တရားရုံးမှာ အလုပ်ကြမ်းနဲ့ ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ်စီရင်ချက်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ စာရေးဆရာ ထင်လင်းဦးကို သာသနာညှိုးနွမ်းစေမှု ပုဒ်မ ၂၉၅ (က)၊ တခြားသူများ ကိုးကွယ်ယုံကြည်ရာဘာသာကို ပုတ်ခတ်ပြောဆိုမှု ပုဒ်မ၂၉၈တို့နဲ့ ချောင်းဦးမြို့နယ် တရားရုံးမှာ တရားစွဲဆိုထားပြီး ဒီကနေ့မှာတော့ သာသနာညှိုနွမ်းစေမှုပုဒ်မ တခုထဲနဲ့ ထောင်ဒဏ် ၂ နှ
Posted: 02 Jun 2015 03:12 AM PDT
အမျိုးသားပညာရေး ဥပဒေကို ငြိမ်းချမ်းစွာ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရိုက်နှက် ဖမ်းဆီး တရားစွဲခံထားရတဲ့ ကျောင်းသားတွေနဲ့ ၀န်းရံပြည်သူတွေကို ဇွန် ၂ ရက်က သာယာဝတီ ခရိုင်တရားရုံးမှာ ထပ်မံ ရုံးထုတ် စစ်ဆေးပါတယ်။ ဒီနေ့ ဇွန် ၂ ရက်နေ့မှာတော့ အာမခံလျှောက်ထားတဲ့သူ ၁၃ ဦးစလုံးကို ပယ်ချတယ်လို့ ရှေ့နေ ဦးရောဘတ်ဆန်းအောင်က ပြောပါတယ်။ “အာမခံကတော့ တင်ထားတာတော်တော်များတယ်။ အကုန်ပယ်တယ်တဲ့။ ၅၀၅ (ခ) က အာမခံပေး
Posted: 01 Jun 2015 08:07 PM PDT
ဓါတ်ပုံ- မေလ ၂၂ ရက်နေ့က ကွယ်လွန်သွားသော ဦးမြင့်အောင် ဂျွန်လ ၁ ရက်၂၀၁၅ မြေသိမ်းခံရမှုကြောင့် မိမိကိုယ်ကိုဓါတ်ဆီလောင်း မီးရှို့ဆန္ဒပြကာသေ ဆုံးသွားသူ ဦးမြင့်အောင်၏ မိသားစုဝင်များအား မိမိပိုင်မြေယာတွင် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကိုင်နေပါလျှက် အရှေ့ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာန ချုပ် ရ.ပ.ခ ပိုင်စိုက်ခင်းကျူးကျော်မှုဆိုကာ ဗိုလ်မှူးကြီး ၀င်းထွန်းအောင်က ရွှေညောင်ရဲ စခန်း တွင် အမှုဖွင့် တိုင်တန်းထားသည်ဟုသိရသည် ။ ရပခ တို
Posted: 01 Jun 2015 08:04 PM PDT
အိမ်ဖြူတော်မှာ သမ္မတနဲ့ တွေ့ဆုံခွင့်ရကြတဲ့ အရှေ့တောင်အာရှလူငယ်တွေထဲက သမ္မတကို ဖိတ်ခေါ်ဖို့ ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသူ မဇင်မာမြင့်။ မြန်မာလူငယ်တွေရဲ့ကြိုးပမ်းချက်တွေကို အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမားကိုယ်တိုင်ချီးကျူး ပြောဆို ခဲ့တဲ့ အတွက်ဂုဏ်ယူ အားတက်မိကြောင်း တနင်္လာနေ့က အမေရိကန်သမ္မတအိမ်ဖြူတော်မှာ ကျင်းပတဲ့ သမ္မတအိုဘားမားနဲ့တွေ့ဆုံပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ မြန်မာလူငယ်တွေက ပြောပါတယ်။ သမ္မတအိုဘားမားရဲ့ (YSEALI) အစီအစဉ်မှာပါ
Posted: 01 Jun 2015 08:00 PM PDT
ဓာတ်ပုံ (Getty) ဇွန်၂ ရက် ယူ ၂၀ ကမ္ဘာ့ဖလား ဘောလုံးပြိုင်ပွဲအဖြစ် မြန်မာနဲ့ယူကရိန်းတို့ ကစားရာမှာတော့ မြန်မာ အသင်းက ယူကရိန်းအသင်းကို ၆ ဂိုး ဂိုးမရှိနဲ့ ရှုံးနိမ့်သွားပါတယ်။ ပထမပိုင်းမှာတော့ ဂိုးမရှိသရေကျခဲ့ပေမယ့် ဒုတိယပိုင်းပွဲချိန် ၁၀ မိနစ်အတွင်းမှာ ယူကရိန်းအသင်းက အဖွင့်ဂိုး အပါအ၀င် ၃ ဂိုးသွင်းယူသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂိုးပြတ်ရှုံးနိမ့်သွားတဲ့အတွက် မြန်မာ အသင်းရဲ့ အုပ်စု ဒုတိယအဆင့်တက်ရေး မျှော်လင့်
Posted: 01 Jun 2015 07:34 PM PDT
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ၂၀၁၆ မှာ အသက် ၆၀ ပြည့်မှာ တပ်မတော် ထိပ်ပိုင်း ခေါင်းဆောင် တွေ တက်ရောက် နေတဲ့ လေးလပတ် အစည်းအဝေး ကို နေပြည်တော် မှာ မေလ ၂၉ ရက် က စတင် ပြုလုပ် နေပါပြီ ။ ပုံမှန် လေးလ တကြိမ် ပြုလုပ် ပေမယ့် အခု အကြိမ် ပြုလုပ်မယ့် လေးလပတ် အစည်းအဝေး မှာတော့ ထူးခြားမှုတွေ ရှိလာ လိမ့်မယ် လို့ လေ့လာသူ တွေက ဆိုပါတယ် ။ နေပြည်တော် မှာ အခုပြုလုပ်တဲ့ လေးလပတ် အစည်းအဝေး မှာတော့ တပ်မတော် ထိပ်
တရုတ် စစ်သားဟောင်း တွေ ကိုးကန့် ကို လေ့ကျင့် ပေးနေတယ် လို့ မြန်မာ စွပ်စွဲ တရုတ် မြန်မာ နယ်စပ်မှာ တရုတ် ဘက်က ကျည်ဆံ အစစ် တွေကို သုံးပြီး စစ်ရေး လေ့ကျင့်မှုတွေ စတင် နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ အစိုးရ တပ်နဲ့ ကိုးကန့် တပ်ဖွဲ့တွေ ကြား တိုက်ပွဲ ဖြစ်နေတဲ့ နေရာ နားမှာ ဒီလို စစ်ရေး လေ့ကျင့်မှု တွေ လုပ်နေတာပါ။ မတ်လက မြန်မာ စစ်လေယာဉ်နဲ့ ဗုံးကြဲခဲ့လို့ တရုတ် ပိုင်နက်ထဲ ကျပြီး လယ်သမား ၅ ယောက် သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
တောင်သူလယ်သမားတချို့ ကောက်စိုက်နေကြစဉ်Photo: Min Thein Aung/RFA ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ထုတ်ယူထားတဲ့ စိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေတွေကို ပြန်ဆပ်ဖို့ ပျက်ကွက်တဲ့ လယ်သမားတွေကို ဒီနှစ် စိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေ ထုတ်ပေးမှာမဟုတ်ကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ် မြန်မာ့လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဘဏ်က ကြေညာ ချက်ထုတ်ထားပါတယ်။ ဒီနှစ်အတွက် စိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေတွေကို မနက်ဖြန် ဇွန်လ ၂ ရက်နေ့မှာ ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပေမယ့် ချေးငွေ မကျေသေးတဲ့လယ်သ
Posted: 01 Jun 2015 07:33 PM PDT
မြင်းခြံ ဇွန် ၁ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မြင်းခြံမြို့ အမှတ်(၁ဝ)ရပ်ကွက်တွင် ဇွန် ၁ ရက် နံနက် ၂ နာရီ မိနစ် ၅ဝ က မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အဆိုပါမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားစဉ်မှာ အမှတ်(၁ဝ) ရပ်ကွက်ရှိ ဒေါ်မြတ်သူထွေး၏ တစ်ထပ်တိုက် နေအိမ်မှဆေးလိပ်များကို မီးအပူပေး(ကျပ်တင်)ရာမှစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ မီးလောင်မှုကြောင့် တစ်ထပ် တိုက်နေအိမ်နှစ်လုံး၊ သွပ်မိုးထရံကာနေအိမ် တစ်လုံး၊ ပစ္စည်းသိုလှောင်ရာဂိုဒေါင်နှ
Posted: 01 Jun 2015 07:26 PM PDT
တောင်ငူ ဇွန် ၁ ဇွန် ၁ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီခွဲ ခန့်တွင် တောင်ငူမြို့ လဲဘူးကျေးရွာ အုပ်စု ကောင်းမှုတော်ရွာသစ်နှင့် အမြန်လမ်းမကြီးကို ဆက်သွယ်ထား သော ကွန်ကရစ်လမ်းတို့ ဆုံရာ လမ်းဆုံအနီးတွင် တောင်ငူတက္ကသိုလ် (ကြို/ပို့)ယာဉ်တစ်စီး တိမ်းမှောက်ခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။ ဖြစ်ပွားပုံမှာ အမြန်လမ်းမကြီး နှင့် ပုံမှန်လမ်းဟောင်းတို့ ဆက်သွယ် ထားသော ကွန်ကရစ်လမ်းအတိုင်း အမြန်လမ်းမကြီးဘက်မှ ပုံမှန်လမ်း ဟောင်းဘက်သို့ ယာဉ်ေ
Posted: 01 Jun 2015 07:10 PM PDT
ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးမောင်မောင်အုန်းက မြန်မာ့ရေတပ်ကကယ်တယ်ထားတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံက လှေစီးထွက်ပြေးလာသူတွေ နဲ့ တွေ့ဆုံစကားပြောစဉ်။ (မေ ၂၃၊ ၂၀၁၅) အရှေ့တောင်အာရှဒေသမှာ လှေစီးပြေး ရွှေ့ပြောင်းနေသူတွေထဲ အဓိက ထွက်ခွာလာကြတဲ့ ဒေသတခုအဖြစ် နိုင်ငံတကာက ပြောဆိုနေကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက အခြေအနေတွေကို အနီးကပ်လေ့လာ သတင်းယူဖို့ ဗွီအိုအေ ဌာနမှူး ဦးသန်းလွင်ထွန်းနဲ့ အဖွဲ့သားတွေ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ရောက် နေကြ
Posted: 01 Jun 2015 07:07 PM PDT
YSEALI ခေါ် အရှေ့တောင်အာရှ လူငယ်ခေါင်းဆောင်မှု ရှေ့ရှုဆောင်ရွက်တဲ့အစီအစဉ်နဲ့ ရောက်နေကြတဲ့ မြန်မာအပါအဝင် အာဆီယံ ဆယ်နိုင်ငံလူငယ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ သမ္မတအိမ်ဖြူတော်မှာ တွေ့ဆုံနေတဲ့ သမ္မတအိုဘားမား။ အမေရိကန်သမ္မတ Barack Obama ဟာ YSEALI ခေါ် အရှေ့တောင်အာရှ လူငယ်ခေါင်းဆောင်မှု ရှေ့ရှုဆောင်ရွက်တဲ့အစီအစဉ်နဲ့ ရောက်နေကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် အာဆီယံ ၁၀ နိုင်ငံက လူငယ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ သမ္မတအိမ်ဖြူတော်မှာပြုလုပ်တဲ့
Posted: 01 Jun 2015 07:03 PM PDT
ပင်လယ်ကူး သင်္ဘောကြီးတွေဆီကို ဒုက္ခသည် စခန်းက လူတွေ ထွက်ပြေးကြတာလည်း သိမြင်ခဲ့ အမေရိကန် ဟောလိဝုဒ်က ဒါရိုက်တာနဲ့ ရုပ်ရှင်မင်းသား Matt Dillon ဟာ ပင်လယ်ပြင်ကို ထွက်ပြေး နေကြတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့က ဒုက္ခသည် စခန်းတွေကို သွားရောက် ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ဒုက္ခသည် စခန်းကို ပထမဆုံး ရောက်လာတဲ့ အမေရိကန်က နာမည်ကြီး သရုပ်ဆောင် ဖြစ်ပါတယ်။ မေလ ၂၉ ရက်နေ့က ဒုက္ခသည် စခန်းတချို့ကို သွားကြည့်ရာမှာ တဲငယ်တွေ အတွ
Posted: 01 Jun 2015 01:36 PM PDT
မေလ (၃၀)ရက်နေ့ ထုတ် မြန်မာသံတော်ဆင့် အတွဲ(၄)၊ အမှတ်(၁၂) ဂျာနယ် ဖတ်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ
Posted: 01 Jun 2015 01:35 PM PDT
မေလ (၂၉)ရက်နေ့ ထုတ် Hot News Weekly Vol5No 244 ဂျာနယ် ဖတ်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ
Posted: 01 Jun 2015 01:34 PM PDT
ဇွန်လ (၂)ရက်နေ့ ထုတ် မြန်မာ့အလင်း နေ့ စဉ် သတင်းစာ သတင်းစာ ဖတ်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ
Posted: 01 Jun 2015 01:32 PM PDT
ဇွန်လ (၂)ရက်နေ့ ထုတ် ပြည်ထောင်စု နေ့ စဉ် သတင်းစာ သတင်းစာ ဖတ်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ
Posted: 01 Jun 2015 01:31 PM PDT
ဇွန်လ (၁)ရက်နေ့ ထုတ် The Messenger Daily Newspaper သတင်းစာ ဖတ်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ
Posted: 01 Jun 2015 09:29 AM PDT
ရန်ကုန် - မန္တလေး အမြန်လမ်း မိုင်တိုင် အမှတ် ၃၅၇ မှာ မေလ ၃၁ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းက တိမ်းမှောက်ခဲ့တဲ့ Elite ကားကိုတွေ့ရစဉ်။ Photo: MOI Webportal Myanmar/ Facebook ရန်ကုန် - မန္တလေး အမြန်လမ်း မှတ်တိုင်အမှတ် ၃၅၇ မှာ မနေ့က Elite ခရီးသည်တင်ကား တိမ်းမှောက် မှုကြောင့် သေဆုံးသူ ၅ ဦးအတွက် အသက်အာမခံကြေး ငွေကျပ် သိန်း ၃၀စီ ပေးအပ်မှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ Elite ခရီးသည်တင်ယာဉ်လိုင်းက ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ Green
Posted by lu bo at 10:11 AM
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၈-၆)
ရဟန်းခံပြီးသော်လည်း လူချွတ်ထိုက်သူ ??
ဝင်ငွေနည်းတဲ့သူက အခွန်ပိုထမ်းနေရပြီးတော့ ဝင်ငွေမျာ...
မြန်မာနိုင်ငံသည် အာရှ၏ ဘုံကျွန် မဟုတ်၊ အမှိုက်ပုံ မ...
DSA ဆင်းတွေက တခြားလူတွေနဲ့ မတူ